Drum mhando dota unotonhorera - China Kechengyi Environmental Protection uye Electric Power Technology
Single mupumburu gang crusher
Michina mvura joini
Drum Type Ash Nzvimbo
The Drum mhando nedota unotonhorera ndiyo dhiramu mhando kupisa exchanger inoshandiswa kutonhora unorema zvinhu, marongerwo uye kupisa kupanana chichiitwa izvo zvakasiyana kuti yenguva dzose kupisa exchanger. Nokuti Drum mhando padurunhuru unotonhorera, nzira nhatu kupisa kuchinjirwa sezvo chafariz nemwaranzi, conduction, uye convection vari kushanda iyoyo, uye chikuru kutonhora svikiro iri mvura uye yechipiri iri mhepo. Zviri refu kunyatsoshanda madota kutonhora zvokushandisa, izvo hwaiitirwa nezvaidiwa guru mavhoriyumu CFB bhaira. The Drum dota unotonhorera chinosanganisira dhiramu, padurunhuru zvekupfakira mudziyo, padurunhuru kubuda mudziyo, nemotokari mudziyo, hutachiwana mudziyo, kutonhora mvura maitiro uye yemagetsi kudzora mano, iro zvakananga kushandiswa inopisa padurunhuru kutonhora CFB bhaira
The Drum dota unotonhorera chinosanganisira dhiramu, kutenderera maitiro, nemotokari hurongwa, dota akawira mudziyo, padurunhuru kubuda mudziyo, kutonhora mvura maitiro uye yemagetsi kudzora mano. Huru mamiriro uye mashandiro ndeinotevera:
Drum: zviri rakanyorwa yomukati Drum dzokunze Drum, uye iumbe akanyudzwa mvura mhango pamwe muhombe vagari uye mvura kudzoka nenyere. Rusvingo yomukati Drum chomukati akaita welded pamwe zononoka-yakarongwa sikuruwa mashizha uye longitudinal mashizha, izvo zvinogona uchatamisa kupisa gang kuti achiparadzira kutonhora nemvura chafariz conduction, convection uye nemwaranzi.
The Drum ndicho chikuru kushanda chikamu Drum padurunhuru kutonhora, uye padurunhuru kutonhora inogona kukamurwa GTL akatevedzana chete Drum dota unotonhorera uye GTLS akatevedzana multi-chubhu kuongorora Drum nedota unotonhorera maererano nemamiriro dhiramu.
Rotating Hurongwa: iri rinoumbwa kutsigira mhete, kutsigira vhiri, ukabata zvinomonereka. The anotsigira mhete iri kuiswa iri kunze dhiramu, izvo rinosundwa yokutyaira mashandiro kuti kuvaparadzanisa dhiramu kutenderera ari mana kutsigira mavhiri. Kukwirira dhiramu anogona akazviisa nokugadzirisa nokutsigira vhiri. The hove vhiri inogona kutirambidza axial misha yacho dhiramu.
Ash akawira mudziyo: nayo rinoumbwa manhole, kuwedzera vadyi, dota akawira mutopota, padurunhuru tangi, dota chisimbiso mudziyo. The bhaira pasi dota achawira dhiramu reMirwi kutonhora kuburikidza padurunhuru zvekupfakira nenyere. Padurunhuru tangi ane kunaka-kumanikidzwa rakavhara pachiteshi. Padurunhuru Kuiswa chisimbiso mudziyo kunogona kutadzisa padurunhuru kubva usabuda parutivi Anti-kuruka chiito.
Ash buditsa mudziyo: iri rinoumbwa nemadota nzira yokubudisa rakavhara pakavha nemadota nzira yokubudisa, uye yakaiswa nezvisingafadzi-kufurirwa mhepo chengarava nemadota buditsa pachiteshi. Kuiswa chisimbiso pabutiro rinoumbwa zviviri bvisika zvikamu (repamusoro uye dzapasi), riri nyore yokuzvigadzirisa.
Kutonhora mvura gadziriro: nayo rinoumbwa kutenderera kwemajoini, mvura nyere ngoma, kudzokera mvura mutopota, simbi hosipaipi. ino zvinogona kuunza kure kupisa woga kubva padurunhuru. The kutenderera vagari anoparadzira Inlet mvura uye kudzokera mvura zvakaenzana panguva nzira yokubudisa kumagumo, riri nyore yokuzvigadzirisa uye yakachengeteka uyewo. The kutenderera joinhi akashongedzerwa nekuchengetedzwa nenhumbi sezvo kumanikidzwa meter, RTD, kuchengeteka vharafu. zvishongedzo iwayo anogona kuiswa pamusoro kutonhora mvura Mapaipi maererano nezvaidiwa mabasa.
Electric kuzvidzora mudziyo: nayo kunyanya rinoreva yemagetsi kuzvidzora cabinet ndokurondedzera kudzora mudziyo, izvo zvinogona kupa simba uye kuzvidzora anonongedzera kuti ash the unotonhorera. Inogona atumire kure mureza kuzadzisa kure kuzvidzora.
The muenzaniso nemadota unotonhorera ndiyo GTL (S) D - N × L (kuruboshwe kana kurudyi), iro, D anomirira Drum dhayamita (mm), kusanganisira 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, uye 2000 mm; N inomirira kukwanisa (t / h); L inomirira kure pakati Inlet uye nzira yokubudisa (mm). Maererano siyana kugadzwa zvinzvimbo, padurunhuru kutonhora inogona semhosva kuruboshwe mhando nezvakarurama mhando, akatarisana padurunhuru kutonhora nzira yokubudisa, zvinonzi akasiya mhando kana injini kuruboshwe uye rakarurama mhando kana injini kurudyi. Kureba padurunhuru kutonhora iri usatsungirira, iyo hochekoche vachikwanisa, dota tembiricha, uye yavose sezvavakatarirwa daro pakati Inlet uye nzira yokubudisa. The goho pamusoro nemadota unotonhorera ndiyo 0 - 80t / h. Uye kutonhora tembiricha iri 80 - 150 ℃
Uise dota kutonhora pamusoro sandara pasi akatakura vachikwanisa kupfuura 6000Pa, (zvibatiso bhaudhi hakusi zvakakodzera), zvino isa midzi simbi pasi makona mana padurunhuru kutonhora chemwenje, uye weld ari kutsvaga simbi pamusoro midzi simbi kuti kudzivirira uchifamba kana padurunhuru kutonhora wakagarira kurudyi nzvimbo
Kana nheyo kupfuura pasi, dira zviviri longitudinal kana ina transverse pachena kongiri ubvise nheyo nesimba kupfuura C30 pasi. vari Apo kuruboshwe mhando uye kurudyi mhando nedota unotonhorera akaronga pedyo nepedyo, nokuti yakakunakira kuvariritira uye kugadzira, kuti nemotokari injini zvinofanira kurongwa panguva rokunze divi, izvo zvinoreva kuisa kuruboshwe mhando nedota unotonhorera ari kurutivi rworuboshwe, uye kodzero kutaipa kurudyi.
GTL dzino chete Drum padurunhuru unotonhorera
1) goho Large, izvo zvinogona kusvika 80t / h panguva vaifanira
2) Large womukati nzvimbo, iyo dzinokodzera rokuongorora uye nyore yokuzvigadzirisa ane mari shoma.
Next: Pneumatic gang buditsa vharafu
Manual mukuru tembiricha gedhi vharafu
Drive cheni giya
Gang dzichifura mudziyo
High tembiricha musimbwa chemarata compensator